Muuri News Network » Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo maanta labo jeer laga careysiiyay & halis uu naftiisa geliyay
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo maanta labo jeer laga careysiiyay & halis uu naftiisa geliyay
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta kormeer aan horey loo shaacin ku tagay afar degmo oo ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasi oo inta badan la sheegay ineysan ka howlgalin degmooyinka ay madaxda ka yihiin.
Gudoomiyaha ayaa tagay Degmooyinka Hodon, Howlwadaag, Dayniile iyo degmada Yaaqshiid wuxuuna kusoo arkay arimo markiisii ugu horeeyay ka careysiiyay.
Gudoomiyaha ayaa tagay degmada Dayniile iyadoo uu iska hurdo gudoomiyaha degmadaasi, kadibna wuxuu tagay degmooyin ay joogaan kaliya ku xigeenada degmooyinka iyo saraakiil ciidan.
Gudoomiyaha oo arimahaasi ka careysan ayaa markii dambe kusoo dhacay wadada soo horma xarunta guriga Habarqadiijo oo ay degen yihiin ciidamada nabad sugida qaranka Soomaaliya.
Ciidamada oo ku dhagay gudoomiyaha ayaa u diiday inuu wadada maro, balse markii dambe ayuu isku sheegay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir, balse waxaa loogu jawaabay in wax walba oo uu yahay inuusan mareynin waddada.
Waxaana la sheegay in markii dambe loogu hanjabay in rasaas lala dhici doono, iyadoo loola soo baxay gaadiidka dagaalka, laakiin markii dambe ayuu soo maray waddada markii arintaasi ay dhex dhexaadiyeen saraakiisha nabad sugida.